काठमाडौं । पेटमा अल्सर भएमा पिडा नाइटोबाट सुरु भई छातीसम्म दुख्छ । समयमै उपचार नगरे यसले भयानक समस्या निम्त्याउन सक्छ । र, पेट सम्बन्धि अन्य समस्याहरु पनि उब्जिन्छन् । पेटको अल्सर भएमा पेटमा प्वाल पर्ने वा घाउ हुने गर्छ । यस्तो अल्सर विशेषगरी गलत खानपानका कारण हुने हो । सामान्यतया, खाना पचाउने एसिडले..
बो,सो,युक्त मासु बोसोयुक्त मासु र जनावरको बो,सो हालेर बनाइएको चिज, बटरजस्ता खाना भरसक खानु हुँदैन । यस्ता खानामा क्या’ ,न्सर लाग्ने जो,खिम बढी हुन्छ । मासुको सट्टा माछा खानु उपयुक्त हुन्छ । र’ ,क्सी र’ ,क्सीको ल,त लागेको छ भने दुई पे,गभन्दा बढी खानु हुँदैन । बढी र’ ,क्सी खाएमा मुख, पा,ठेघ,र र स्त,नस,म्ब,न्धी..
शरीर फिट राख्न र सधैं जवान देखिन यसरी व्यायाम गर्नुस्
एजेन्सी । शारीरिक रुपले सक्रिय रहँदा हाम्रो शरीर स्वस्थ र आकर्षक देखिन्छ । शरीरको अनावश्यक बोसो घटाउन, मोटोपना नियन्त्रण गर्न तथा मुटु, रक्तनली सम्बन्धी रोग, मधुमेह र क्यान्सर जस्ता रोगहरुबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो शरीरलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । शारीरिक रुपमा सक्रिय रहनका लागि व्यायाम..
१. एक दिनमा ४ – ५ वटा ओखरको सेवन गर्नाले मुटुलाई स्वस्थ राख्नुका साथै शरीरमा कोलेस्ट्रेरोलको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्छ । २. ओखरमा एन्टी अक्सिडेन्ट नामक तत्व हुन्छ जसले कपाल तथा त्वचा सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्नुका साथै बढ्दो उमेरमा हुने चाउरीपनाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । ३. ओखरको सेवनले मानसिक..
एजेन्सी । यौन समस्यासँग सम्बन्धित समस्याहरुको बारेमा पुरुषहरु खुलेर कुरा गर्दैनन् । उनीहरु डाक्टरसँग आफ्नो पीडाका बारेमा बताउन पनि संकोच मान्छन् । तर डाक्टरहरु भने जहिल्यै पनि आफ्नो सेक्सुअल समस्याका बारेमा गम्भीरताका साथ लिन सल्लाह दिने गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार सेक्सको शारीरिक र मानसिक दुबै..
रक्सीको ओभरडोजले ह्याङ बनाए कसरी हटाउने ?
रक्सी सेवनका अनेक बाहना हुन्छन् । त्यसमा पनि गुड फ्राइडे त सबैको मुखमा बसेको शब्द हो । शुक्रबार बेलुका अत्यधिक मदिरा सेवनले भोलिपल्टसम्म त्यसको असर रहिरहन्छ । अघिल्लो दिनको साथीभाइसँगको रमाइलो भोलिपल्टको ह्याङ्ओपरले सताउँदछ । तर यसबाट राहत महशुस गर्न केही घरेलु उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि..
काक्रोको बैज्ञानिक नाम कुकुमिस साटिभस ( Cucumis sativus) हो। यो कुकुरबिटासी (Cucurbitaceae) परिबारमा पर्द्छ। यो एक बर्सिय लहरे बाली हो। यसको उत्तपति भारतको दछिण पुर्बी भागमा भएको पाइन्छ। काक्रो नेपालको परापुर्ब काल देखि नै खेती गरिदै आएको मुख्य बाली हो। यसको खेती पहाड देखि तराईसम्म गर्न सकिन्छ । नेपालमा मध्यपहाडी..
सामान्यता कुनै घाउ वा चोटपटक लागे यो आफैं निको हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा हाम्रो शरीरले यस्ता घाउ वा चोटपटक निको पार्न सक्दैन । घाउ भएको लामो समयसम्म पनि खाटा नबसे वा निको हुने लक्षण नदेखिएमा अस्पताल जानु पर्दछ । किन आफैं निको हुदैँन घाउँ ? यी हुन् कारण : १. बाहिरी संक्रमण छालाले शरीरलाई हानिकारक..
यसरी टिकाउनुहोस् मोबाइलको ब्याट्री
काठमाडौँ। मोबाइल अहिले आम मानिसको दैनिक आवश्यकता बनेको छ । मोबाइलमा ब्याट्री नटिक्ने अहिलेको ठूलो समस्या हो । यो अवस्थामा मोबाइलको ब्याट्री टिकाउने केही टिप्स पढ्नुहोस् : १. स्क्रिनको ब्राइटनेस कम गरेर चलाउने सबैभन्दा धेरै ब्याट्रीको खपत गर्ने मोबाईलको अंगमघ्ये एक हो मोबाईलको स्क्रिन/डिस्प्ले ।..
मानिस स्वस्थ्य हुनमा उसको जीवनशैली, खानपान तथा रहनसहन कारक रहन्छ । तर कतिपय अवस्थामा मानिस जान अन्जान आफ्नो स्वास्थ्यमाथि नै लापरबाहि गरिरहेको हुन्छ । अर्थात मानिस प्रकृतिसँग टाढा हुदैं प्रविधिसँग नजिकिदै जादाँ रोगको शिकार हुदैँ गएको छ । त्यसैले यो लेख मार्फत स्वस्थ्य रहने ५० प्राकृतिक उपाय र..
हार्ट एट्याक अप्रत्यासित रुपमा अपर्झट हुने र तत्काल आपतकालीन उपचार हुन नसके ज्यानै समेत जान सक्ने र बाँची हाले पनि जीवनभर परावलम्बी र पराश्रित हुनु पर्ने घातक रोगको रूपमा लिइन्छ । यसको जोखिम र कारकहरुको उचित निदान गरि हटाउन सके उल्ट्याउन पनि सकिने यो रोगकै कारणले संसारभर १ करोड ७७ लाख मानिसहरुको..
मङ्लबार, असार ८, २०७८ मा प्रकाशित
चिन्ताले मानिसलाई अशान्त बनाउँछ । त्यतिमात्र होइन धेरै चिन्ता गर्ने मानिसमा यसैका कारण विभिन्न प्रकारका रोगहरु पनि लाग्ने गर्दछ । यस्तोमा चिन्ताबाट कसरी बच्ने त ? चिन्ताबाट बच्ने केही उपायहरुः १. चिन्ता हुनको मुल कारण हो, आफुले सोचे अनुसारको वा मेहनत गरे अनुसारको काम नबन्नु । यस्तोमा मानिस अनावश्यक..
मुटु जोगाउन अवलम्बन गर्नुहोस् यी १० टिप्स
शनिबार, जेष्ठ २२, २०७८ मा प्रकाशित
अहिले अधिकांश मानिसमा मुटुरोगको समस्या देखिने गरेको छ । यो वृद्ध उमेरका मानिसमा मात्र नभई युवा र बालबालिकामा समेत हुने गर्दछ । मुटुरोग हुनबाट कसरी बच्ने त ? १. दैनिक व्यायाम दैनिक ४५ मिनेटसम्म व्यायाम गरेमा असल कोलेस्टेरोल र इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढ्नगई टाइप २ डाइबिटिजलाई नियन्त्रण हुन्छ र मुटुरोग..
काठमाडौं । उमेर नपुग्दै कपाल फुल्ने समस्या अहिले आम मानिसको साझा भएको छ । कपाल सेता हुनु, झर्नु सामान्य समस्या भइरहँदा यसको उपचार अझ सरल हुन्छ । कपालको हेरचाहका लागि मानिसहरु अक्सर रासायनिक युक्त कुराहरु प्रयोग गर्दछन् । जसको परिणाम अझ डरलाग्दो हुन्छ । बजारमा पाइने रासायनिक युक्त स्याम्पुलगायत..
दैनिक एक गिलास दुध पिउने व्यक्तिलाई मुटु रोगको खतरा १४ प्रशितसम्म कम !
एजेन्सी । दैनिक एक गिलास दुध पिउने व्यक्तिलाई मुटु रोग र हृदयघातको खतरा १४ प्रशितसम्म कम हुने एक शोधको रिपोर्टमा उल्लेख छ । दैनिक एक गिलास दुध पिउने व्यक्तिमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि कम हुने बेलायतको रिडिङ् युनिभर्सिटीका अनुसन्धाकर्ताहरुको आफ्नो रिपोर्टमा बताएका छन् । शरीरमा कालेस्ट्रोलको..